हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई पार्टीगत आँखाले हेर्दैनौं, देशको चस्माले हेर्छौंः कांग्रेस नेता महत - Everest Dainik - News from Nepal
हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई पार्टीगत आँखाले हेर्दैनौं, देशको चस्माले हेर्छौंः कांग्रेस नेता महत
काठमाडौं– मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । चीनबाट लामो समयपछि नेपालमा यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । उनको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले व्यापक तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न पनि हाम्रो समस्या, स्वार्थ र आवश्यकताका बारेमा निर्धक्क कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वदेश फर्कन हतारमा थिएनन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी
पहिलो कुरा उनीहरुको चासो र चिन्ता के छ त्यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । चीनले तिब्बतको विषयलाई प्रमुखताका साथ लिएको छ । त्यसमा नेपालले सदैव एक चीन नीति अपनाउँदै आएको छ र हाम्रो भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ ।
याे पनि पढ्नुस चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणबारे विदेशी मिडियाले के लेखे?
अर्को सम्पर्क सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत प्रसारण लाइन, सडक, रेललगायत विषय छन् । यसमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा भनेको ती लगानीबाट नेपाललाई दीर्घकालीन कति फाइदा हुन्छ भन्ने हो ।
जस्तो रेलको कुरा छ, यसमा लगानीको कुरा गरेरमात्रै हुँदैन । यसबाट प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन विचार पुर्याउनुपर्छ । प्रतिफल नहुने गरी हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा ऋण लिन सक्दैनौँ । रेलको लगानीबाट उचित प्रतिफल आउँदैन भने ऋण लिएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कि उहाँहरुले अनुदानमा बनाइदिने समझदारी गर्नुपर्यो ।
याे पनि पढ्नुस चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग छलफल
ट्याग्स: डा. प्रकाशशरण महत, सी चिनफिङ